बहसमा माक्र्सवादका बेलौते बाछिटा - Karobar National Economic Daily
बहसमा माक्र्सवादका बेलौते बाछिटा
query_builderOctober 5, 2017 9:15 AM supervisor_accountडा. अतीन्द्र दाहाल visibility381
परिस्थितिसँग मिलाउन वरिष्ठ अर्थशास्त्री, दार्शनिक वा राजनीतिज्ञ भन्दै एक वा बहुधारमा चिनाइने हस्ती कार्ल माक्र्सले सन् १८६७ देखि १८८३ बीच ‘दास क्यापिटल’ नामक पुस्तकका तीन श्रृंखला लेखे । उनले १८४८ लेखेको ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ शीर्षकको राजनीतिक घारणापत्र चर्चित भयो ।
भौतिक सम्पत्तिलाई मानिसबीचको अन्याय, शोषण, दमनको कारण बताए । अडाम स्मिथले १७७६ मा ‘वेल्थ अफ नेसन’ लेख्दै आर्थिक–भौतिक सम्पन्नतालाई देशको सबलता सम्झन्थे । सम्पत्तिमाथि माक्र्सले विरोध र स्मिथले मोह देखाए । विपरीतार्थक यी दुवै अवधारणाले मानिसलाई भौतिक सम्पन्नता र धनको खास महŒव हुने आभास दियो । आममानिसले अद्भुत शान्ति, बन्धुत्व अनि भाइचारा बिर्संदै सम्पत्ति मोहमा फस्ने प्रचलन समाजको स्थायी परिचय बन्न थाल्यो ।
आदिम सभ्यता अथवा ‘प्रिमिटिभ कम्युनिजम’मा सबैबीच सहकार्य थियो । मानिसहरूमा स्वार्थ थिएन, वर्गविहीन उक्त समाजमा मानवबीच पुरापुर समानता र एकता थियो । जंगली युगमा भएका थुपै्र असहजताका कारण मानिसहरू बिस्तारै खेतीपातीमा लागे । परिवारको विकास भयो, स्वार्थ र सामीप्यता बढ्यो । निश्चित मानिसहरूले खेती गर्न जग्गा÷जमिन कब्जा गर्दै बाँकीलाई खेताला बनाए । वर्गको बीजारोपण भयो, स्वार्थ र फाइदा÷बेफाइदा हेर्न थालियो ।
औद्योगिक क्रान्तिसँगै केही मालिक र अरू मजदुर भए । आज प्रविधिको आधिपत्यबाट अधिक मानिस निकम्मा हुँदै छन् । हेबु्र विश्वविद्यालय जेरुसेलमका प्राध्यापक लेखक युवल नोभा हरारीले पछिल्ला दुई पुस्तक ‘सेपियन्स ः ए ब्रिफ हिस्ट्री अफ ह्युमन काइन्ड’ र ‘होमो दिअस ः ए ब्रिफ हिस्ट्री अफ टुमरो’मा मानिसको सम्पत्ति र स्वार्थमा आधारित अनियन्त्रित यात्रा अनि अन्धकार उन्मुख भविष्यको कहालीलाग्दो वर्णन गर्छन् ।
माक्र्स सम्पूर्ण अन्याय, अत्याचार तथा सामाजिक द्वन्द्वको आधार भौतिक सम्पत्ति रहेको भन्दै सम्पत्तिको क्षयीकरण गर्नुपर्नेे भन्थे, तर तत्कालीन समयका केही सम्भ्रान्तहरूको भौतिक अधिकतालाई भत्काउन उत्प्रेरणा दिने माक्र्सको दर्शनले बाँकी आम सामान्य मानिसमा अथाह धन कमाउने अनियन्त्रित र उत्कट अभिलाषा थोपरिदियो । भौतिक सम्पत्ति र आर्थिक सम्पन्नताको तृष्णा अतृप्त रूपले जागृत गराइदियो । निषेधित भनिएको कुरामा मानवचासो झन् सघन हुन्छ, माक्र्सवादको सान्दर्भिकता यहाँ नराम्ररी चुक्यो ।
कुनै–कुनै प्रस्तुतिमा भन्न नखोजेको कुराचाहिँ बढी प्रमाणित हुन्छन् । दार्शनिक फ्रेड्रिक निच्सेले भगवान्को अस्तित्व नकार्दै हेरक कुरामा विज्ञानसम्मत कारणसँगै वैज्ञानिक र सिलसिलेवार प्रमाण हुन्छन् भन्ने बुझाउन एउटा किताबमा ‘द गड इज डेड’ भनेर लेखे । तर, अरू थुपै्रले व्याख्या गरिदिए, “भगवान् हँुदैन भन्नेले भगवान् मरे भनेर किन लेख्नुपथ्र्यो ? त्यसैले ऊ भगवान् थियो भन्ने सम्झछ र मान्छ ।” यो नियतिको अर्को चरणमा माक्र्सवादका सिद्घान्त अनि आजको मानवजीवन पर्दै छ ।
माक्र्सले धनको कारणले वर्गविभेद भएको बताउँदै बुर्जुवाहरूको धन खोस्नुपर्ने बताए । यद्यपि उनले भनेजस्तो वर्गविहीन समाज कहिल्यै बनेन, बरु वर्गका नयाँ÷नयाँ धारहरू बने । केही लेखकले त उनको सोचलाई युटोपिया अथवा काल्पनिक रामराज्यसमेत भने । १९७० को दशक संसारमा निकै लोकप्रिय कम्युनिजम आज ५ देशमा खुम्चँदै छ । सर्वहाराका नेता भनिने नै सर्वभोगी हुँदै छन् । साम्यवादी देशका प्रमुख नै संसारका धनाढ्यहरूको सूचीमा पर्छन् । भ्लादिमिर पुटिनको सम्पत्ति ५ सय बिलियन डलरबराबर भएको तथ्यांक छ ।
२०१६ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकअनुसार शून्य भ्रष्टाचार मूल्यांकनमा रूस २९ र उत्तर कोरिया ८ मात्र अंक ल्याउँदै संसारमा उच्च आर्थिक भ्रष्टाचार हुने देशमा गनिन्छन् । चीनमा वर्षैपिच्छे हजारौँलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा मृत्युदण्ड दिएका समाचार बाहिरिन्छन् । माक्र्सवादले सबै मानव समान हुने कल्पना गरायो । यसले कहिल्यै कसैलाई खुसी बनाएन । मानव स्वभावैले अरूभन्दा विशिष्ट बन्न र फरक हुन चाहन्छ । भौतिक सम्पन्ता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रोज्ने मानिसका स्वाभाविक प्राकृतिक अपरिवर्तनीय विशेषता हुन् ।
माक्र्सवादले धनप्रतिको मानिसको मोहलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दा तिरस्कार गर्न खोज्यो । बाहिर÷बाहिर सिद्घान्तप्रति ताली पिट्नेमा नै भित्रचाहिँ त्यसको अस्वीकार्यता बढदै गयो । माक्र्सवादी अनुसरणको कटाक्ष गर्नेहरूले यदि कसैले माक्र्सवादमा विश्वास गर्छ भने उसको बिहे गरिदिनु, त्यसपछि विश्वास गर्दैन भन्थे । अझ एउटा मानिस २५ वर्ष नपुग्दासम्म कम्युनिस्ट भएन अनि २५ पुगेपछि पनि फेरि कम्युनिस्ट नै भइरह्यो भने ऊ स्वस्थ र सन्तुलित मानिस भए÷नभएको परीक्षण गर्नुपर्छ समेत भनिन्थ्यो । मानिसले माक्र्सवादलाई त्यो तहमा अनुपयोगी देखाउने गर्थे ।
माक्र्सले औद्योगिक समाजको आधारमा बनाएको अवधारणा धेरै ठाँउ मेल खाँदैन । अहिले उद्योगभन्दा सेवा र मनोरञ्जनको व्यापार बढ्दो छ । माक्र्सवादले सदाकाल पुँजी र प्रजातन्त्रको विरोध गरे पनि माक्र्स स्वयम्ले पँुजीवादी मित्र एंगल्सको सहयोगमा जीवन बिताए । आफ्नै देशले निकाला गर्दा प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा शरण लिए । माक्र्सका जीवन र सिद्घान्त दुवैमा स्थिरता र उपयोगिता देखिएन ।
माक्र्सले महŒव दिएको धनकै कारण मानिस भौतिक सम्पन्नताको तृष्णामा नैतिक र अनैतिक कामसमेत गर्न हिचकिचाउँदैनन् । आर्थिक सम्पन्नताका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक रूपमा क्षयिकरण हँुदै छन् । सामाजिक सद्भाव, सदाचारिता, आपसी सहयोग, एकतामा खलल पुग्दै छ । प्राध्यापक चैतन्य मिश्रकृत पुस्तक ‘डेभेलोपमेन्ट अफ अन्डरडेभेलोपमेन्ट’ले हाम्रो समाज गुणात्मक हिसाबले अधोगतिको पथगमन गरिरहेको देखाउँछ । सरकारका नायक र जनताका लागि काम गर्नुपर्ने मानिसहरूसमेत भौतिक सम्पन्नतालाई मुख्य लक्ष्यमा राख्छन् ।
नेता तथा मन्त्री नै भ्रष्टाचारका अग्रपंक्तिमा भेटिन्छन् । १९६७ देखि १९९८ सम्म इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति रहेका महम्मद सुहार्ताे लगभग ३५ अर्ब डलर भ्रष्टाचार गरेकामा दण्डित भए । २०१२ मा फिजीका पूर्वप्रधानमन्त्री लाइसेनिया क्वारिजलाई भ्रष्टाचारबापत जेल चलान गरियो । बाज्रिलमा भएको एक घोटालामा २०१२ मा त्यहाँका शक्तिशाली नेता जोस डिरेकु दण्डित भए ।
२०१२ मा नै क्रोएसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री इभो सनादर १० वर्षका लागि जेल पठाइए । केही पहिले इजरायलका पूर्व–प्रधानमन्त्री इहुद अर्लमर्टलाई ६ वर्षको जेल सजाय भयो । व्यापारी, व्यवसायी, पेसाकर्मीलगायत सबैको एउटै र अन्तिम ध्येय कुनै पनि तवरले धन आर्जन गर्र्नेे बन्दै छ । हत्या, हिंसा, लुटपाट, डकैतीजस्ता अपराधको अत्यधिक वृद्घि हँुदै छ । २०१७ को मध्यावधि तथ्यांकअनुसार क्राइम इन्डेसमा भेनेजुएला ८४ नम्बरसहित अगाडि छ । कन्ज्युमरिस्ट इकोनोमीको यो समयमा मानिसको परिचय उसको काम अनि कर्तव्यपरायणता नभई उसले उपभोग गर्ने बजारी सेवा÷सुविधाको आयतनमा मापन गरिन्छ ।
सिद्घान्तका पुस्तक निलेर अनावश्यक तर्क÷वितर्क ओकल्नमा माक्र्सका विचारहरू कैद हुँदै छन् । यसका प्रशिक्षार्थीहरू हरेक ठाउँमा समस्या देखाउन, प्रत्येक पक्षमा अत्यचार र शोषण देख्न उक्सन्छन् । आफ्नो काम निपुणता र इमान्दारितासाथ समाजको भलाइका निमित्त सम्पादन गर्नेभन्दा अरूको विरोध गरेर आप्ूmलाई राम्रो ठान्ने प्रवृत्तिमा रमाउँदै छन् । समृद्घिको स्वदेशी संकथनलाई छाडेर भड्किला बहसमा उत्रने चलन बढ्दै छ । कम्युनिजम मिसन कम र फेसन बढी बन्दै छ ।
आपूmले न्यायोचित आर्जन गरेर होइन, अर्काको हड्पेर वा अरूलाई शोषण गरेर सम्पत्तिमा आधिपत्य गर्ने अभ्यास बढ्दै छ । मजदुर र मालिकका अनेकन रूप देखिँदै छ, शोषण आर्थिक मात्र नभई मनोवैज्ञानिकसमेत बन्दै छ, स्वार्थ चुलिँदै छ, शोषण गहिरिँदै छ । मालिकभन्दा ठूलो बाधक प्रविधि र त्यसको कृत्रिम बौद्घिकता बन्दै छ । सम्भ्रान्तबाट भएको शोषणबाट मुक्ति खोज्नेभन्दा आपूm पनि सम्भ्रान्त भएर अरूलाई शोषण गरी रमाउनेतिर समाज धकेलिँदै छ । धनको विरोध गर्ने बहानामा अधिक धनको चाहना गर्ने मानव संस्कार हुर्कंदै छ ।
यहाँसम्म आउँदा माक्र्सका सिद्घान्तहरू असफलता र असन्तुलनउन्मुख देखिए । त्यसैले अब माक्र्सवादी सान्दर्भिकताको पुनव्र्याख्या र फरक प्रयोगको अभ्यास दुवै आवश्यक छ ।
राजनीति बहस माक्र्सवाद कार्ल माक्र्स